Muuqaalka FSX / FSX-SE - X14 - Gegada Diyaaradaha ee Degmada LaBelle. Gegada dayuuradaha ee degmada LaBelle (X14) waxay ku taalaa koonfurta badhtamaha Florida (FL), USA waana xarun dawladeed, adeegsi dadweyne oo la aasaasay Janawari, 1956. X14 waxay leedahay 5254 x 75 ft laydh iftiin leh oo leh bidix 4-light PAPI ah labada dhinacba. Gegada diyaaraduhu waxay leedahay tilmaame dabayl iftiimaya iyo qorrax u dhac qorrax ka soo baxa berriga. Gegada diyaaraduhu waxay hoy u yihiin 74 diyaaradood - 59 Single engine, 11 Multi, 1 Heli iyo 3 Gliders. Noocani wuxuu ku yimid isku day ah inuu bixiyo nooc ka saxsan garoonka diyaaradaha iyo aagga ku xeeran iyadoo la adeegsanayo keydka FSX muuqaalka iyadoo aan lagu darin. Mashruucu wuxuu adeegsadaa dhammaan maktabadaha si xor ah loo heli karo waana metelaad ugu dhow garoonka diyaaradaha. Waxaa qoray Frederick zelor.